Apple Marketing: lesona 10 azonao ampiharina amin'ny orinasanao
Alatsinainy, Novambra 19, 2018 Douglas Karr
Tian'ny namako ny manome fotoana sarotra ahy amin'ny maha-fanboy an'i Apple ahy. Azoko omena tsiny tanteraka izany amin'ny namana tsara iray, Bill Dawson, izay nividy ahy ny fitaovana Apple voalohany - AppleTV… ary avy eo niara-niasa tamiko tao amin'ny orinasa iray izay mpitantana ny vokatra voalohany nampiasa MacBook Pros. Mpankafy aho hatrizay ka izao, ivelan'ny Homepod sy ny seranam-piaramanidina, manana fitaovana tsirairay aho.
Alarobia, Jolay 13, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity dia tao anatin'ny fivoriana roa nifanaovako tamin'ny orinasa samihafa aho tamin'ity herinandro ity izay nifantohan'ny resaka anatiny: ny voalohany dia i Sigstr, fitaovana fanaovana sonia sonia mailaka hitantanana sonia imailaka manerana ny orinasa. Olana lehibe iray ao anatin'ny fikambanana ny hoe mifantoka amin'ny andraikiny ny mpiasa ary tsy mandany fotoana hampitana ny marika ivelany amin'ny prospect sy mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny fitantanana sonia mailaka manerana ny fikambanana iray, Sigstr miantoka ny vaovao
Ahoana ny fomba hizarana ny atiny ho azo zaraina bebe kokoa
Asabotsy Jolay 12, 2014 Douglas Karr
Ny lohatenin'ity sary ity dia ny The Secret Formula ho an'ny The Perfect Viral Share. Tiako ilay infographic fa tsy mpankafy ilay anarana aho… voalohany, tsy mino aho fa misy ny raikipohy. Manaraka, tsy mino aho fa misy fizarana tonga lafatra. Mino aho fa misy fitambaran-javatra sy zava-mitranga izay mitarika amin'ny atiny lehibe zaraina. Ny sasany amin'izany dia vintana tsotra fotsiny satria manoloana ny ankavanana